Alefaso amin'ny alàlan'ny OSF - AfricaArXiv
The Ivotoerana ho an'ny siansa misokatra mampiantrano an'i AfricaArxiv amin'ny alàlan'ny mpizara Open Science Framework Preprints Famandrihana OSF.
PLease araho ny làlan-kaleha amin'ny 'Alohan'ny handefasanao'pejy. Raha sendra misy fanontaniana dia andefaso mailaka izahay submit@africarxiv.org.
Ho fanampin'izay dia mety te hamaky ianao help.osf.io/.../How-to-Prepare-Your-Preprint
Vantany vao vonona ny fandefasana ny soratanao dia mandehana any amin'ny Vavahadin-tserasera fandefasana OSF AfricaArxiv.
Amin'ny maha-izy azy fotoana Mpampiasa OSF, mamorona kaonty OSF na misoratra anarana miaraka amin'ny anao ORCID Solon'anarana.
Raha handefa horonantsary iray dia tsato fotsiny avy eo ary apetraho avy eo amin'ny desktop ny fisie, ary tsindrio ny hitahiry hanombohana ny fampidinana.
Misafidiana fifehezana mifandraika amin'izany.
Raha mizara lahatsoratra izay efa navoaka teo aloha ianao dia azafady manampy ilay lahatsoratra DOI hampifandraisana azy ireo. Azonao atao ny manampy fanampiny ny teny fanalahidy, ny daty fanontana ary ny abstract.
Mba hanampiana mpiara-manoratra, azafady mba jereo raha ho nisy mpampiasa OSF voasoratra ireo; raha tsy izany, ampio izy ireo amin'ny mailaka.
Pleaseo azo antoka fa fantatry ny mpanoratra rehetra ary efa nanaiky ary nanaiky izany. Hampandrenesina azy ireo ny fanekena ny taratasy fangatahana.
Atolory ny taratasinao. Ny fandefasana ny fangatahana fanaraha-maso momba ny kalitao sy ny fanarahana ny lisitray ary mivoaka an-tserasera ao anatin'ny 3 na 5 andro fiasana.
Hanova ny iray amin'ireo nomerainao efa nekenao, Azonao atao ny manavao ny fidirana DOI amin'ny alàlan'ny sora-tanana lahatsoratra vaovao amin'ny alàlan'ny kaontinao OSF. Mitadiava fampahalalana bebe kokoa momba ny fomba fanaovana izany amin'ny help.osf.io/hc/en-us/articles/360019930573-Edit-Your-Preprint
Mandraisa anjara amin'ny AfricaArXiv amin'ny OSF
Azonao atao ny manatevin-daharana anay amin'ny fandrakofana ny sarany ho an'ny fampiantranoana mialohaArXiv fampiomanana amin'ny Open Science Framework (OSF) Ho an'ny antsipiriany dia mankanesa any opencollective.com/africarxiv/contribut/africarxiv-on-osf-2020-25060
Votoatiny afrikanina misimisy kokoa ao amin'ny OSF
OSF ho an'ny andrim-panjakana
Mianara bebe kokoa momba ny Repoblika fikarohana afrikana afrikanaafricarxiv.org/african-digital-research-repositories
- misy ny [Data set] ao amin'ny doi.org/10.5281/zenodo.3732172
AfricaArXiv amin'ny OSF - fampisehoana
Lahatsoratra bilaogy mifandraika
28 Aogositra 2020
14T Febroary 2020
XunXth June 25
[Webinar] Fampidirana ny AfricaArXiv
Oct 2018 - Ity webinar ity dia manolotra ny AfricaArXiv, serivisy fanomanana maimaimpoana vaovao ho an'ny Scientists Afrikanina. Ny mpandray anjara dia mahita ny fomba fandefasana ny fikarohana ataon'izy ireo manokana mba hampidirina ao amin'ny fanangonana AfricaArXiv ary koa ny sasany amin'ireo tombony azo avy amin'izany raha ny amin'ny fizarana fahalalana bebe kokoa sy ny fotoana mitombo ahafahana manangana fiaraha-miasa eto sy ivelan'i Afrika.
Mizaha amin'ny alàlan'ny AfricaArXiv ao amin'ny OSF